Malunga Nathi-Shandong Well Data Co., Ltd.
I-Shandong Well Data Co., Ltd. yasekwa ngo-1997, kwaye yadweliswa kwi-National Equities Exchange kunye neeNtelekelelo.(I-NEEQ) ngo 2015, ikhowudi stock 833552.Ngaphezulu kophando oluqhubekayo lobuchwephesha kunye nokuqokelelwa kwezinto ezintsha, i-Shandong Well Data Co., Ltd. ineqela letekhnoloji engundoqo eneempawu ezizimeleyo zoBukrelekrele kunye namalungelo awodwa omenzi wechiza kwinkalo ye-ID yokuchonga itekhnoloji, iitheminali ezikrelekrele kunye nezicelo, isoftware kunye neeplatifti zehardware kunye nezisombululo ezintsha njl.njl. Le nkampani lishishini lesizwe lobugcisa obuphezulu kunye neziko lobuchwephesha beshishini, iziko lophando lobuchwephesha bobunjineli be-IOT kwaye linamalungelo awodwa abenzi abangama-21 (amalungelo okuqamba ama-5) kunye nesoftware engama-25 yeeCopyrights.Lenze isicwangciso sesizwe esinye senkxaso yenzululwazi nobuchwepheshe kunye neeprojekthi ezingaphezu kwe-10 zephondo nezamamasipala zenzululwazi nobuchwepheshe.
Njengomyili wehardware okrelekrele onobuchule obunobuchule be-OEM ye-ODM kunye neenkonzo ezahlukeneyo zokwenza ngokwezifiso, sinabasebenzi abangaphezu kwe-150, phakathi kwabo, abantu aba-6 bane-master degree kunye nabantu abangaphezu kwama-80 bane-bachelor degree.Umndilili weminyaka engama-35, abasebenzi be-R&D bathatha phantse i-38% yabasebenzi bebonke benkampani.Siyiqela lophando lobugcisa obuphezulu kunye neqela lophuhliso elinolwazi lobuchwephesha bombane, isayensi yekhompyuter kunye nobuchwepheshe, ubunjineli bonxibelelwano kunye nezinye iingcali.Amava e-OEM kunye nempumelelo ye-OEM kunye ne-ODM asinceda kakhulu ukuba siphumelele kuzo zombini itekhnoloji nakwintsimi yoshishino.
Uzinikele kwitekhnoloji ye-ID yokuchonga kwaye isekelwe kubuchule obuphambili bophando olunzulu kunye nokufunda kweli candelo, elifana nobuso, i-biometric, iminwe, i-Mifare, i-Proximity, i-HID, i-CPU njl., siye sadibanisa neteknoloji engenazingcingo kunye nophando, imveliso, intengiso yeetheminali ezikrelekrele ezifana nokuhamba ixesha, ulawulo lofikelelo, ukusetyenziswa, ubuso kunye nobushushu bokubona indawo yokubona ubhubhani we-COVID-19 njl.njl. ezinokuhlangabezana kakhulu neemfuno ezahlukeneyo zentengiso kunye nokudala amaxabiso amahle kuluntu.
Ngaphandle kweemveliso eziqhelekileyo zehardware ezikrelekrele, inkampani inokubonelela ngeendlela ezahlukeneyo zojongano lokudityaniswa ukuhlangabezana neemfuno zentengiso.I-SDK, i-API, kunye ne-SDK elungiselelweyo inokubonelelwa ngokwanelisa iimfuno zabathengi.Kwiminyaka emininzi yophuhliso kunye ne-ODM, i-OEM kunye neendlela ezahlukeneyo zoshishino, iimveliso ze-WEDS zidume kwihlabathi lonke, ezigubungela amazwe angaphezu kwama-29 eYurophu, eMelika, kuMbindi Mpuma, eMzantsi Mpuma kunye namanye amazwe amaninzi.
Kwixesha elizayo, i-Shandong Well Data Co., Ltd. iya kuqhubeka igxininise kuphando kunye nophuhliso lwe-Artificial intelligence kunye nohlalutyo lwedatha kwinkalo yokuqaphela isazisi.
Ngokusungula izinto ezintsha zenzululwazi nezobuchwepheshe, siya kuqhubeka sibonelela abasebenzisi ngeemveliso neenkonzo ezixabiseke ngakumbi, kwaye sisebenze kunye namahlakani ethu entsebenziswano ukukhokela ishishini.
Ukufezekisa ixabiso labasebenzisi kunye nabasebenzi
Yiba liqonga labasebenzisi ukwenza ixabiso, iqonga labasebenzi lokuphuhlisa imisebenzi yabo kwaye babe lishishini elihlonitshwayo lobuchwephesha obuphezulu.
Imigaqo yokuqala, ingqibelelo kunye nepragmatism, inkalipho yoxanduva, ukwenza izinto ezintsha kunye notshintsho, ukusebenza nzima kunye nokuphumelela intsebenziswano
Yantai Well Data System Co., Ltd yasekwa.
I-intshi ye-10.4 ye-intshi yombala we-LCD ye-multimedia ye-multimedia ye-model ye-multimedia yexesha lokuhamba imodeli ye-4350 yaphuhliswa, eyayiyiyokuqala umatshini wokuhamba e-China, yenza ixesha elitsha lobuchwepheshe lokuhamba kwexesha.
IWEDS yonke kwiqonga elinye ikhadi iphandwe ngempumelelo kwaye ipapashwe kwimarike.Ngeli xesha ifumene ubhaliso lwelungelo lokushicilela lemveliso kwiOfisi yePropati yoBukrelekrele kaRhulumente.
Imodeli yokuqala yemveliso ye-S6 imveliso eyamkela i-ARM kunye nenkqubo yokusebenza edibeneyo yakhululwa.
Iimveliso zothotho lwemodeli ye-V zakhululwa, i-WEDS emiliselwe imveliso ekrelekrele yenziwa i-serialized kwaye iphuhliswe njengesiqhelo.Yayilixesha lokuqala ukuthumela iimveliso kwiimarike zaphesheya.
Inkqubo yolawulo lolwakhiwo lwegama lokwenyani yapapashwa.
H uthotho lweemveliso ezikrelekrele ezine-CDMA/GPRS ezingenazingcingo zafika, nenkqubo yolawulo lolwakhiwo lwegama lokwenyani yapapashwa.
Inkqubo yolawulo loFikelelo lomkhosi yapapashwa ngempumelelo.
Ukuze kuhlangatyezwane neemfuneko zemarike zombane, ezimiselwe kumaziko kunye nezifanelekileyo, itheminali ye-POS ene-LCD enemibala yaphunyezwa.
I-WEDS yophando lwe-platform yefu yapapashwa ngokusesikweni.I-CCTV Channel 2 "Isiqingatha seyure yoQoqosho" idlan' indlebe nenkampani ye-WEDS kunye ne-CEO ye-WEDS uMnu. Wang Guannan.
Ibhodi yokulawula ukufikelela kwichungechunge lwe-WA kunye nomfundi wekhadi le-ER wakhululwa.Itheminali ekrelekrele enokucwangciswa ye-PIT kunye neqonga layo lapapashwa ekugqibeleni emva kweminyaka emininzi yophuhliso.
Iitheminali ze-POS ze-2416 D ezineendlela ezingaxhunyiwe kwi-intanethi kunye ne-intanethi zapapashwa.
2416 I series terminal yapapashwa.
I-POS ebanjwe ngesandla yapapashwa.
I-SCM yonke kwiqonga lekhadi elinye inguqulelo yexesha lokwenyani yapapashwa.
Yawongwa “njengendawo ekrelekrele kwinqanaba leSixeko”.
Guqula igama libe yiShandong Well Data Co., Ltd.
Thatha inxaxheba eBeijing kumsitho weNational Equities Exchange kunye neeNteyitimenti.
Iofisi yeWEDS ekuMazantsi-ntshona yasekwa ngokusesikweni.I-WEDS ifumene ibhaso lokuqala lenkqubela phambili yeNzululwazi nobuchwepheshe.
Iitheminali zokuchonga ubuso ezikwintsebenzo ephezulu zafika emarikeni.I-WEDS isakhiwo esitsha se-R&D kunye nemveliso yagqitywa kwaye yasetyenziselwa uphuhliso olungakumbi.
Iimveliso zekhowudi ze-BD ze-BD zaphandwa.Ukuqokelelwa kokuziphatha kunye nohlalutyo lwedatha kwapapashwa uphuhliso olunzulu.
Uthotho lweemveliso zobuso ezinomgangatho ophezulu wokusebenza zafika kwimarike, njenge-G5, N8 njl.